Xog: Magacyada xubno Shabaab ah oo Mareykanka uu duqeyn ku baadi goobayo | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Xog: Magacyada xubno Shabaab ah oo Mareykanka uu duqeyn ku baadi goobayo
Xog: Magacyada xubno Shabaab ah oo Mareykanka uu duqeyn ku baadi goobayo
Bulsha:- Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay inay ugaarsaneyso Hogaamiyayaasha maleeshiyaadka Shabaab ee sida tooska ah uga howlgala Saldhigyada ku yaalla Gobolka Shabellaha Hoose.
Dowladu waxa ay tilmaantay inay si gaara u doondooneyso Hogaamiyayaasha ay ka go’do talada Kooxda kuwaa oo hadda isku khilaafsan go’aan ka gaarista ku biirida Daacish.
Taliyaha Ciidanka Mareykanka ka jooga Africa ee AFRICOM General Thomas Waldhauser, ayaa sheegay inay dajiyeen qorsho fog oo suuragalinkara in muddo kooban lagu dilo Hogaamiyayaasha ugu sareeya Shabaab.
General Thomas Waldhauser, waxa uu sheegay in dilalka iyo ugaarsiga Hogaamiyayaasha Shabaab ay u adeegsan doonaan diyaaradaha aan duulimaadka laheyn.
General Thomas Waldhauser, ayaa carab dhabay in shaqsiyaadka ay sida gaarka ah u doondoonayaan ay kamid yihiin Horjoogaha Shabaab Axmed Diiriye (Abuu Cubeyda) iyo Ku-xigeenkiisa Mahad Karataay.
General Thomas Waldhauser, ayaa ka digay in deegaanada ay ku sugan yihiin Hogaamiyayaasha Shabaab ay ka agdhawaadan dadka shacabka ah, waxa uuna farta ku goday inay ka go’an tahay inay soo afjaraan shaqsiyaadkasi.
Geesta kale, General Thomas Waldhauser, ayaa ku baaqay in Shabaab ay ka faa’iideystaan cafiska uu u fidiyay Madaxweynaha Somalia.